ဂလိုစိတယ်​ ပိတ်​သတ်​ယီးရယ်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Critic » ဂလိုစိတယ်​ ပိတ်​သတ်​ယီးရယ်​	11
Posted by ムラカミ on Mar 31, 2015 in Critic, Drama, Essays.., Marketing | 11 comments
ဘယ်သူရှိမလဲ မွတဲပေါ့ စာမရေးတာ ကြာဘီ
လက်စလက်နလေးရှိရက်နဲ့ စတေးတပ်စ်ကျတော့တင်သလားမမေးနဲ့ စွာကစွာသေး
အမတ်ကြီးရောဘာထူးတုန်း ဆီရောင်းတာအားမရလို့ ဆီမာဆတ်ပါဖွင့်ထားသလားမှတ်ရ
အပျိုဂျီး မွဝေလည်း စစ်ကိုင်းချောင်ဝင်တော့မယ်ထင့်
ဗေတားနဲ့ ကိုနို့စို့မိ စမ်းအုံးမလား ရွာထဲပေါ်မလာချက်က ဆုံးကုန်ပြီတောင်မှတ်ရ
တယောက်က တင်တွေရင်တွေမပါရရင် စာမစီတဲ့ကိုအမဲဆီ
နောက်တျောက်ကျ အရည်အချင်းလေးရှိ ကော်နက်ရှင်လေးကောင်းပါလျက် အများအကျိုးရှိမှာမရေးဘူး ချေးဖြစ်မယ့် အစားအသောက်ချည်းပဲရေးတယ် တာမွေလူမိုက်
ရွာကြီးပျက်ရင် ဒီလူတွေမလိမ်မာလို့ လို့မှတ်ပါဗျာ
တော်သေးတယ် မိမိဂီလေး ရှိနေသေးလို့
မဟုတ်ရင် ရွာဆိုတာ ကျီးနဲ့ဟုတ်ဒင်း ဖြစ်နေလောက်ပီ
ပြောတော့ ရွာကိုခြစ်တယ် စာကိုခြစ်တယ်ဆိုပီး
ခင်ဇော် says: နာ့ ပလတာနာ ဘာရေးရေးပေါ့။
နင့်လို့ သူများ နားမလည်တဲ့ ရသ တွေ မရေးပြီးတာပဲ။
နာ့ စာကမှ ရသ စာပေ အစစ် မက ရသာ စာပေဖြစ်။
ဖတ်ရတာ အရသာကို ရှိလို့။
Wow says: ဒါနဲ့ ညီးရဲဇားဟောင်းတွေကို ငယ်ကျိုးငယ်နာဖေါ်တဲ့ပို့စ်တွေ အကုန်ပီးဘီလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ကိုဘလက် ပြောတာ ဘာတဲ့??
ကရင်မ စပယ်ရှယ်လစ်ကြီး တဲ့!!
Wow says: အားလုံးပီးတော့ သူပဲ ယင်တလောင်းလောင်းနဲ့ ကျန်ခဲ့တာလေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: ရွာထဲ မရောက်တာကြာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကို သတိရမိ
အရင်က ကိုယ့်ကို အစဉ်တစိုက် တိုက်ခိုက် နှိမ်ဖဲ့ချင်တတ်သူတွေကိုပါ ပြန်လွမ်းတတ်ပြီ
သူတို့မရှိတော့လည်း ပျင်းသလိုလို ဘာလိုလို Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: အရင်က ကိုယ့်ကို အစဉ်တစိုက် တိုက်ခိုက် နှိမ်ဖဲ့ချင်တတ်သူတွေကိုပါ ပြန်လွမ်းတတ်ပြီ
သူတို့မရှိတော့လည်း ပျင်းသလိုလို ဘာလိုလို
ဧပြီ ဖူး လို့ ပြန်ပြော၊ ပြန်ပြော!!
Alinsett@Maung Thura says: တကယ် တကယ်
ကိုယ် ဘာတခုမှားမလဲ စောင့်ကြည့်ပြီး
(ကိုယ် မမှားလည်း မှားသလိုလိုဖြစ်အောင် ရှာကြံ ဂွင်ဆင်ပြီး)
.ပြောစရာ ခွင်ထဲရောက်တာနဲ့ ချောက်ထဲတွန်းချတတ်တဲ့ တချို့ တချို့လက်တွေရဲ့
အရက်စက်မခံရတာကြာတော့ ပျင်းရိဖွယ်ရာကို ဖြစ်လို့
.ကိုယ့်ကို အစဉ်တစိုက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သူတို့ရယ်
ပြန်မလာကြရင်တော့ မထိုက်တန်လို့ လွင့်မျောသွားတာလို့ မှတ်မှာနော်။
naywoon ni says: အင်း နာဒို့ ရန်​လာလာစတဲ့ ဟို က​ရောင်း ဆြာမ ​တြောက်​လဲ လစာ​ဒွေတို့ပါရက်​နဲ့ ရန်​စ စြာ ကိစ္စ မ​ပေါ်​သေးလို့လညးမသိ မလာပြန်​ဖူး ။ တစ်​ခါတ​လေ​တော့လည်း တူ့ ဒတ်ိ ရ​နေသား Was this answer helpful?LikeDislike 7172
Mike says: .ဂလိုစိတာ ကောင်းပါတယ်
.ဂလိုကား မှ မကောင်းတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: ကရင်မ Specialist ကြီးရေးတဲ့ ဒီပိုစ်တစ်ပုဒ်လုံးကို
ဆိုတဲ့ စာသားလေး ထိန်းသွားတာဗျ…။
အဲဒါလေးကပဲ ဟာသရသ ရစေခဲ့ပြီး
တော်သေးတယ်…မိမိဂီ လေး ရှိနေသေးလို့…။
ငါက နီနီခင်ဇော်ရဲ့ မာရီယို MTV ကြည့်ပြီး
နီနီ ခင်ဇော် ပေါင်လုံးလေးကြီးတွေရဲ့အလှကို
တင်မပါ ရင်မပါ…သို့သော် ပေါင်လုံးဖြူဖြူ တုတ်တုတ်ကြီးတွေတော့
မွသဲ ( 17082011 ) says: နာယားဒဲ့နေရာနင်လာကုပ်ပေး အာ့ဆိုငါရေးမယ်။ ငါ့မယ်ထုံးတို့ချိန်တောင်မြ။